🥇 Mmemme maka ire ngwaahịa
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 288
Mmemme maka ire ngwaahịa
Video nke mmemme maka ire ere
Dezie usoro ihe omume maka ire ere
Na-ere n'ime ụlọ ahịa - ụdị ọrụ pụrụ iche metụtara ire nke ngwongwo akọwapụtara nke ọma - iberibe akụ (ọtụtụ mgbe uwe, obere oge - akpụkpọ ụkwụ, ngwa, wdg), na-adị na ngwaahịa. Akaụntụ na-agụnye idebe ụdị ndekọ niile na oke oke nke ndekọ ngwaahịa na ahịa. Mostzọ kachasị atụkwasị obi ma dị mfe iji mee ka mmemme ụlọ ahịa na-arụ ọrụ nke ọma bụ mmemme maka ire ere. Ezubere usoro ọ bụla maka ire ngwaahịa iji hazie ọrụ nke ụlọ ọrụ na-azụ ahịa, mee ka usoro nhazi data na nhazi usoro dị ngwa, na ịhazi usoro ọrụ (ọkachasị, ọrụ ngalaba ahịa). Fọdụ ndị njikwa, na-eche na ha achọpụtala ụzọ dị ọnụ ala karịa ịzụta mmemme maka ire ngwaahịa, kpebie ibudata mmemme maka ịre ngwaahịa na ntanetị site na ịjụ usoro nyocha saịtị ọchụchọ iji ree ngwa ahịa n'efu ma ọ bụ mmemme ịre ngwaahịa n'efu. Ekwesịrị ịkọwa na ụzọ a maka nsogbu ahụ dị njọ kpamkpam na ọ nwere ike ọ bụghị naanị imebi ntụkwasị obi gị na mmemme mmemme akpaghị aka, kamakwa iduga nfu nke ozi. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ọ bụla programmer ga-elekọta mmezi nke a free omume maka ere ịchịkwa ire nke ngwongwo (ma ọ bụrụ na, ọ bụghị na-enweghị ndị dị otú ahụ a mkpali dị ka ego), na nke a mkpa nke oru nkwado mee elu mee ma ọ bụ mgbe e mesịrị ga-emekwa gosi Yabụ, ndị ọkachamara niile na-akwado naanị mmemme maka ire nke ndị mmepe a pụrụ ịtụkwasị obi.
Mmemme a pụrụ ịdabere na ya nke na-ere ngwaahịa na njikwa nchekwa - USU-Soft. Usoro ihe omume a maka ire ere nwere ọtụtụ uru karịa analogues ma nwee ike igosi nsonaazụ kacha mma ngwa ngwa. Ejiri oke igbugbu ya, ịdị mfe nke iji ya, mmefu ego dị mma yana mmemme mmezi ziri ezi. Ndị mmepe nke USU-Soft nwere akara mba ụwa nke ntụkwasị obi D-U-N-S, nke na-akwado mmata nke usoro mmemme a nke njikwa ngwaahịa na ụwa niile dịka otu n'ime ngwaahịa kachasị mma maka ire ngwaahịa. Usoro ihe omume ire ere nke ngwongwo na-enyere gị aka ịkwado ire ere na-enye gị ohere iji ọ bụghị naanị akụrụngwa dị na ụlọ ahịa (ụlọ ahịa na akụrụngwa - ngwa nyocha, akara akwụkwọ nnata, aha, wdg), mana ngwaọrụ ọhụrụ, nke ọ bụghị ụlọ ahịa niile amatala - ọdụ data nchịkọta ọgbara ọhụrụ (DCT). Nke a bụ obere kọmpat, nke onye ọrụ ahụ na-ebu n'akpa ya ma jiri ya rụọ ọrụ. Otu ihe atụ: iji duzie ihe ndekọ, ị na-eji ya ma chekwaa oge dị ukwuu. A na-agụpụta data ahụ wee burufee ya na ebe nchekwa data mbụ. Ngwaọrụ ahụ nwere ike ịchekwa ụfọdụ data, nke dị oke mkpa. Ya mere, ọbụlagodi enwere ọtụtụ ihe na ụlọ nkwakọba ihe, ịnwere ike ịgbakwunye ha niile na nchekwa data na ikike nchekwa nke usoro ịre ahịa nke ịkọ akụkọ enweghị njedebe.
Isoro ndị ahịa rụ ọrụ kwesịkwara nlebara anya pụrụ iche. Enwere ike ịbanye ozi gbasara ndị ahịa ozugbo na tebụl ego. Dịka ọmụmaatụ, ị banyere n'usoro ego nke ire na nhazi aha, aha nna, aha nnabata nke onye ahịa, yana afọ ole ọ dị, ọ bụrụ na achọrọ ya, ihe masịrị ya na ihe ndị ọzọ. A na-enye ndị ahịa ọ bụla ego maka ịzụ ihe ọ bụla. Anyị na-eche na enweghị isi na ịkọwa ihe usoro ego ahụ bụ, n'ihi na ụlọ ahịa niile ejirila ogologo oge a na-adọta ma na-ejigide ndị ahịa. Ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ike iguzogide ohere iji ego ndị a chịkọbara karịa ego wee zụta ọtụtụ ngwongwo na ụlọ ahịa gị. Ga - ahụ ụdị azịza onye ahịa ya zụtara ma nata ego. Ya mere, ị ga-aghọta ihe ọ masịrị ya ma si otú a na-ezipụ mgbasa ozi ma kwuo na ị ga-azụta ihe ọzọ, na-agba ya ume itinyekwu ego. Ndị ahịa nwekwara ike kewaa n'ime edemede iji mee ka ọ dị mfe ịnyagharịa site na nnukwu nchekwa data nwere ozi gbasara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa. Njikwa nke ndị ahịa bụ ihe dị mkpa na nzukọ azụmahịa ọ bụla.
Nkewa a nwere ike ịdabere na njirisi dị iche iche: dabere na ọnụ ọgụgụ nleta (na ndị ahịa na-adịghị ahụkebe); dabere na ọnụnọ ma ọ bụ enweghị mkpesa (na ndị anaghị eme mkpesa na ndị na-eme ya oge niile); dabere na ụfọdụ ịzụrụ, na afọ, n'okporo ámá nke obibi, wdg Somefọdụ ndị ahịa ọbụna kwesịrị ka e nye ndị VIP ọnọdụ na ihe ùgwù niile ha chọrọ ka e nye ha. Na iji na-akpọtụrụ ndị ahịa gị oge niile, ịnwere ike iji ụzọ 4 nke nkwukọrịta - Viber, SMS, e-mail na ọbụlagodi olu. You nwere ike izipu mgbasa ozi, katalọgụ, onyinye pụrụ iche, ego, ma ọ bụ kpọọ ihe omume, kelee ụbọchị ezumike, kelee maka ịzụrụ ihe, gwa ndị mbata ọhụrụ nke ngwongwo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Chọrọ izere mmejọ mgbe ị na-arụ ọrụ na ngwaahịa na ahịa? Youchọrọ ịgbanwere ụfọdụ ọrụ siri ike na igwe nke nwere ike ijikwa ya nke ọma na ngwa ngwa? Dochọrọ ịkwalite azụmahịa gị nke ukwuu nke na ndị na-asọmpi gị ga-anọ n'azụ? Wee nweere onwe gị ịhọrọ usoro ire ere nke njikwa na akụrụngwa. Anyị na-ekwe nkwa ihe a niile, ọbụnadị karịa. Anyị na-eji obi ụtọ iju ndị ahịa anyị anya. N'ebe nrụọrụ weebụ anyị ị ga-ahụ ozi niile ịchọrọ, yana ị nwere ike ibudata nsụgharị ngosi efu iji wụnye ya na ụlọ ọrụ gị ma lelee ma ihe niile anyị gwara gị bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị. Anyị nwere ike ịkwado gị na sistemụ arụmọrụ anyị na usoro ọgbara ọhụrụ agaghị emechu gị ihu na ị ga-achọ ịga n'ihu na-eji ya! Kpọtụrụ anyị n'ụzọ ọ bụla masịrị gị. Anyị na-akpọtụrụ mgbe niile ma nwee obi ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere.